မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: လိုလျှင်ကြံဆ နည်းလမ်းရ
အားလုံးအတွက် myanmarbloggers.org ဒိုမိန်း ယူထားပါတယ်။ ကျမတို့ ဘလော့ဂါတွေအတွက် အနှောက်အယှက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဘန်းကျော်ရတဲ့ဒုက္ခကို ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတစ်ခုဆီကို လွှဲလိုက်ရင် ကြည့်တဲ့သူအားလုံး အတွက် အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဒိုမိန်းတွေ မွထနေအောင် ယူမဲ့အစား အရင် မိတင်းတွေတုန်းက portal ကိစ္စ အိုင်ဒီယာလေးကို အခြေခံပြီး အဲဒီ ဒိုမိန်းလေး ၀ယ်ထားလိုက်တယ်။ကိုယ်တွေ အချင်းချင်းထဲက လိုချင်တဲ့သူတွေကို subdomain 200လောက် လုပ်ပေးမလို့ xxxxxx.myanmarbloggers.org ဆိုပြီးတော့ပါ။ လောလောဆယ်တော့ free of charges ပါပဲလေ။ နောက်မှ ပေါ်တယ်လို လုပ်တာအတွက် Hosting ကိစ္စက ပြန်စီစဉ်ပါမယ်။ လောလောဆယ် ဖတ်ဖို့ လို့သက်သက်ကတော့ ဘန်းကျော်စရာမလိုအောင်ရယ် စုစုစည်းစည်း unite ဖြစ်အောင်ရယ် အနေနဲ့ပဲ changing or relaying domain from blogspot ပါ။ အနည်းဆုံး ကျမတို့ စည်းလုံးစုစည်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို စုစည်းနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးအရ ဒိုမိန်းတစ်ခုတည်းမှာ ဘလော့ဂ်တွေ များနိုင်သလောက်များအောင် လက်တွဲပြီး နေလိုက်ကြရင် မကောင်းဘူးလား။ ဘလော့ဂ်ရွာလေးပေါ့။ကိုယ့်ပို့စ်ကို ကိုယ်ရေးဖို့ကတော့ ကျော်ရေးဦးပေါ့ ပုံတွေကတော့ ဘလော့စပေါ့ကနေ မဟုတ်ပဲ တခြားတနေရာ ကနေ အပ်လုပ်(upload) လုပ်မှ ရမယ်။ ကွန့်မန့်အတွက်ကတော့ ဟဲလိုစကန်(Haloscan) သုံးရင် အဆင်ပြေမယ် ပြောတယ်။ စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့။ တကယ်လို့ xxxxx. myanmarbloggers.org ပါ ဘန်းရင်တော့ နောက်ထပ် ဒိုမိန်း ထပ်ဝယ်ဦးမယ်လေ။ နောက်တစ်ရွာ နောက်ဒိုမိန်းတစ်ခုကို ပြောင်းကြတာပေါ့။တကယ်တမ်း ဒီဒိုမိန်းကိစ္စက အရင်တုန်းက မိတင်းမှာဆွေးနွေးဖြစ်ကြတဲ့ စီမီနာမှာ မျက်လုံးပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အိုင်ဒီယာလေးပေးရင်း သူငယ်ချင်း ပီကေ က ပိုက်ပိုက်စိုက်ပြီး သူဝယ်ပေးတယ်လေ။အခုလက်ရှိတော့ မယ်လိုဒီမောင်၊ မျက်လုံးနဲ့ ပီကေကို အက်ဒမင်(Admin) ပေးထားတယ် ဆိုတော့ မယ်လိုဒီမောင်ကလဲ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတွေကို တိုက်ရိုက်လုပ်ပေးမယ်။ ပီကေကလဲ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို တိုက်ရိုက်လုပ်ပေးမယ် ။ မျက်လုံးလဲ အဲဒီလိုပဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပေါ့နော်။ဒါကြောင့် စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ မည်သူမဆို bloggers@myanmarbloggers.org ကို email ပို့ပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကွန့်မန့်ထဲမှာ ၀င်ရေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နာမည် (nick name)ရယ်၊ ဘလော့လိပ်စာရယ်၊ လိုချင်တဲ့နာမည်ရယ် ကိုထည့်ရေး ပေးစေချင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ subdomain အသစ်အနေနဲ့ ထည့်ပေးပြီးတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကတော့-ကိုတက်စ်လာ (tesla.myanmarbloggers.org)-ဘာညာ (barnyarbarnyar.myanmarbloggers.org)-နေဘုန်းလတ် (nayphonelatt.myanmarbloggers.org)-တေဇာ (tayzar44.myanmarbloggers.org)-ကဗျာလမ်း (modernpoemroad.myanmarbloggers.org)-စိုင်းစိုင်း (saisai.myanmarbloggers.org)-ပင့်ဂိုးလ် (cuttiepinkgold.myanmarbloggers.org) နဲ့-မိုးလှိုင်ည (moehlaingnya.myanmarbloggers.org) တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာ လိုချင်တဲ့ နာမည်ဆိုတာ ဥပမာ-ကိုတက်စ်လာက အရင်က teslanetblog အစား သူလိုချင်တဲ့ tesla အနေနဲ့ ထည့်ပေးဖို့ ပြောထားတာမျိုးပါ။ စိုင်းစိုင်းဆိုရင်လဲ အရင်က sailashio အစား saisai ပါတဲ့ဗျာ။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ အရင်က ဘလော့စပေါ့ က နာမည်ကိုပဲ ပြန်ယူပေးထားတာမျိုးပါ။ခုဆိုရင် လိပ်စာပိုင်ရှင်တွေဘက်ကလည်း ဒီ Setting လေးတွေ ၀င်ပြင်ရပါဦးမယ်။Blogger.com မှာ Log in လုပ်လိုက်ပါ။ကိုယ် နာမည်ပြောင်းချင်တဲ့ ဘလော့ဂ်ရဲ့ Setting ကို ၀င်လိုက်ပါ။ အပေါ်ပုံမှာ တွေ့တဲ့အတိုင်း Publishing ဆိုတဲ့ Tab ကိုရွေးပါ။ နောက်ပြီး အဲဒီအထဲမှာ Switch to: Custom Domain (Point your own .....) ကိုတွေ့အောင်ရှာပါ။ တွေ့ရင် Custom Domain ကို ကလစ်နှိုတ်ပါ။အပေါ်ပုံရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာ Already ownadomain? Switch to Advanced settings ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တကယ့် page မှာတော့ ညာဘက်အောက်ထောင့် မဟုတ်ပါ။ တွေ့ရင် Switch to advanced settings ကို ကလစ်နှိုတ်ပါ။ဒါဆို အပေါ်ပုံကို တွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီအထဲက Your Domain http:// ဆိုပြီး ကွက်လပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကွက်လပ်မှာ ကိုယ် တောင်းဆိုထားတဲ့နာမည်နဲ့ ဒိုမိန်းနာမည်ကို ထည့်ပါ။ yourname.myanmarbloggers.org ပေါ့။ပီကေအနေနဲ့ ဆိုရင် pikay.myanmarbloggers.org လို့ ထည့်သလို ကျမနာမည်နဲ့ဆိုရင်တော့ အဲဒီနေရာမှာ melodymaungmm.myanmarbloggers.org လို့ ထည့်ရမှာပါ။ ဒါဆိုပြီးပါပြီ။ သူတို့ (Blogger.com) လွှဲလို့ အပြီးကို စောင့်ရုံပါပဲ။ နောက်ပြီး setting ၀င်ပြင်ပြီးပြီ ဆိုရင် blogger.com ကနေ .org လှမ်းညွန်ဖို့ သူတို့ ပြောင်းစရာရှိတာ ပြောင်းရပါတယ်။ ဒါသူတို့ဖာသာ လုပ်မှာပါ။ ကျနော်တို့ဖက်က အချိန် စောင့်ယုံပါပဲ။ ကိုယ့် setting ပြောင်းပြီးပြီးချင်း မပေါ်လို့ဆိုပြီး ပြန်မပြင်လိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဒီကိစ္စကို စီစဉ်ဖို့အတွက် အများဆုံးကြာချိန်က ၄၈ နာရီပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမက ၅ မိနစ်တောင် မစောင့်လိုက်ရပါဘူး။ တချို့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ တစ်နာရီ နီးပါးလောက် စောင့်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီလို လွှဲနေတဲ့ အတောအတွင်းမှာ blogspot.com နဲ့ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် .org ကို မပြောင်းခင်ဆက်ခြားမှာ blogspot.com နဲ့လဲ ၀င်လို့ရနေဦးမှာပါ။ .org ကိုလွှဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ blogspot.com နဲ့ ရိုက်ထည့်ပေမယ့် Address Bar မှာ myanmarbloggers.org နဲ့ ပေါ်နေမှာပါ။ ဒါဆိုရင် .org ကို လွှဲပြီးသွားပြီလို့ ယူဆလို့ရပါပြီ။လုပ်ကြည့်ပါ။ အဆင်မပြေတာရှိရင် bloggers@myanmarbloggers.org ကို အီးမေးပို့ပြီး ပြောနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ အကူအညီတောင်းချင်ရင့် သူငယ်ချင်း မျက်လုံး နဲ့ ပီကေ ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျမကိုလည်း အချိန်မရွေး မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။ပီကေရဲ့ မူရင်း ပို့စ်များကတော့ ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်နော်။ပြီးတေ့ာ ဝေဖန်ဆွေးနွေးအကြံပေးစရာများနှင့် အတူ မေးလ် (သို့ ) ကွန့်မန့်များကို ကြိုဆိုလျှက်ပါ။
Great!!! List me naw Ma Mee...Khunmyahlaing.myanmarbloggers.org? great idea
အမ tayzar44.myanmarbloggers.org ယူမယ်နော် နော်လို့
Thanks ma mee, thanksမွန်းသက်ပန် (ဆေး-၁)
မမီရေ - အကြံဥာဏ်လေး ကောင်းတယ်ဗျာ။ ထွက်ပေါက်တစ်ခုပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့လုပ်ချင်ရင် လာပိတ်ဆို့ကြဦးမှာလေ။ မပိတ်မချင်းတော့ ကျွန်တော်တို့ အလင်းကို မြင်နေဦးမှာပါ။ မမီရေ - oa6.myanmarbloggers.org ဆိုတာလေးကို ကျွန်တော်ဦးထားမယ်ဗျာ။
Karaweik ကရ၀ိတ် 妙声鸟 Alvin (Sumedha)
Hi Melody,Blogspot has this requirement..."Hint: If you want to publish to an external FTP server, you will need to Set 'Blog Readers' to 'Anybody' and useaClassic Template."Since I am on New Blogspot Template (Not Classic Template), I may not be able to use external FTP server. I'll have to look for other alternatives.Thanks!
မောင်ရေ ရမယ်ဆိုရင်တော့ainmetdiary.myanmarbloggers.orgယူထားပေး...နော် မောင် အာဘွား....
not sure if i should getasubdomain 'cuz i am planning to move to wordpress but i don't know much about it so i'm still learning
Melody,I noted another problem with sites using the subdomain... EOT fonts do not work anymore!EOT, once made foraparticular url, is ONLY for that URL. If you change URL, you have to re-create EOT or add the new URL to that EOT project.So, for EOT to work again, all sites using the subdomain have to re-create the EOT or add the subdomain to the EOT... not easy for some blogging novices to do.
http://aclmdy.blogspot.comaung chan aungchan06@gmail.complz i need to haveadomail name.i will sent youamail.i like domain is http://nettar.myanmarbloggers.org
Latest results of testing the behaviour of subdomain...1. There is no need to change blog template to Classic Template. New Blogger Template works because this isadomain re-direction setting (not an external FTP server setting)2. EOT font-embedding needs to be re-created to include the new domain, in addition to the original blogspot domain.3. Users of IE7 may face some problems with EOT fonts. IE6 apparently gave no problem in EOT font display.:)
မမီ ရတုန်းလေး နေရာဦးထားဦးမယ်။ မမီစာပို့ထားတာ ကြာပြီ ကျွန်တော် ဖတ်မရလို့ ၊ ခုမှ ဖတ်လို့ ရသွားလို့ .. ကျေးဇူးပါဗျာ. ကျွန်တော် လိပ်စာလေးဦးထားချင်ပါတယ်။ ရန်ပုံငွေလိုလည်း ပြောပါ။ပုံမှန်ပဲhteinkmin.myanmarbloggers.orgနေရာရှိနေဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ မကြာခင် ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ပြန်ရေးနိုင်မှာပါ. အင်တာနက်လျှောက်ထားတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းလာမယ်ဆိုလား။ စောင့်ရတာလည်း စတ်မရှေတော့ဘူးဗျ.
Thanks Ma Mee.Thanks.